Jooji Waqtiga Lagu lumiyo Oo Samee Dardaaran Hadda Si Aad U Badbaadiso Qoyskaaga | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Jooji Waqtiga La Daayo Oo Samayso WILL Hadaad Ku Ilaalinayso Reerkaaga
Dardaaranka waa mid ka mid ah dukumiintiyada ugu muhiimsan ee aad waligaa noloshaada ku abuuri doonto. Adoo sannado badan shaqeynayay, adoo aruurinaya hantida, waxaad jeclaan laheyd inaad kuwa aad jeceshahay siiso waxyaabahaas iyo nolol wanaagsan markaad baxdo.
waxay yareysaa culeyska dhaqaale iyo walaaca
Hantidii Hantida Imaatinka Imaaraadka
Dardaaran ayaa kaa caawinaya in tan la dhammeeyo. Haddii aadan ka fikirin inaad qorto dardaarankaaga, markaa waxaa lagugula talinayaa inaad bilowdo inaad tixgeliso inaad kala hadasho qareen ku saabsan qoritaanka mid ka dhakhso badan.
Waa maxay kiniinadu?
A ayaa go'aaminaya sida hantida loo qaybin doono dhimashada milkiilaha, maxaa yeelay taasi waxay yareynaysaa culeyska dhaqaale iyo culeyska qoyska saaran. Waa inaad hubisaa in doonistaadu ansax tahay haddii kale wax saameyn ah kuma yeelanayso, waxaana lagugu tixgelin doonaa inaad ku dhimatay dowlad-goboleed. Dardaaran waa qayb kaliya oo ka mid ah dhammaan geeddi-socodka qorsheynta guryaha.
Go'aan ka gaadho hantida lagu soo dari doono dardaarankaaga. Go'aan ka gaadho cidda dhaxli doona hantidaada. Xullo qof fuliyaha ah oo maamuli doona dhismahaaga. U dooro mas'uulka carruurtaada.
Maxaan ugu baahanahay dardaaran?
Qaybta ugu dambeysa ee qorshaynta guryahaagu waa rabitaankaaga, oo waxaa jira saddex sababood oo ay tahay inaad u baahan tahay dhammaystiran oo ilaa iyo hadda la diyaarin doono.
Marka hore, dardaarankaagu waa aaladda u sheegta dadka kale sida aad jeceshahay in hantidaada loo dhinto. Haddii dardaaranka uusan jirin, hantidaada waxaa loo qeybiyaa si waafaqsan qaaciddada qaanuunka, halkii lagu saleyn lahaa waxa aad rabto. Si loo dammaanad qaado in dadka ama hay'adaha aad maskaxda ku hayso ay ka helaan hantida aad u qeybsateen, waxaad u baahan doontaa caawinaad looyar si markaa dhismahaaga dhismaha ahi uu si qaabeysan u qaabeeyo sida aad rabto.
Waa muhiim inaad yeelato dardaaran si dadka kuugu dhow ay fahmaan sida aad u rabto in wax loo fuliyo. Iyadoo dardaaran ah, waxaad siisaa tilmaamo cad oo ku saabsan qaybinta hantida, yareynta walaaca iyo jahwareerka waqti horeba aad u adag.
Ugu dambeyntii, ansax waxay hubineysaa in culeyska dhaqaale ee qoyskaaga aad u yaraado. Si kastaba ha noqotee, haddii uusan jirin wax ansax ah oo dhimashada ah, sharciyada uurjiifka ayaa la adeegsan doonaa. Tan macnaheedu waa in hantida loo qaybin doono iyadoo loo raacayo qaanuunka qaanuunka, sida kor lagu soo sheegay. Qoyskaaga, waxay ku adkaan kartaa diyaarinta dukumiintiyada iyo buuxinta shuruudaha sharciga ah ee maareynta guryaha mindhicirka marka la barbar dhigo kan ansax ah, taas oo sii kordhineysa dhaqaalaha iyo culeyska qoyskaaga.
Maxamadaha UAE waxay u hogaansami doonaan shareecada
Kuwa haysta hantida UAE waxaa jira sabab macquul ah oo lagu doonayo in la sameeyo. Dawlada Hoose ee Dubai ayaa ku dhawaaqday in 'Maxkamadaha UAE ay u hoggaansamaan Sharciga Sharciyada xaalad kasta oo aan jirin wax boos ah'.
Taas macnaheedu waa haddii aad dhimato adigoon doonin ama qorsheynin hantidaada, maxkamadaha maxalliga ahi waxay baari doonaan hantidaada waxayna u qaybiyaan sida waafaqsan Sharciga Sharciga. Inkastoo tani ay u muuqan karto ganaax, saameynteeda maaha sidaas. Dhammaan hantida shakhsiyeed ee meydka, oo ay ku jiraan xisaabaadka bangiga, waa la barafeyn doonaa illaa iyo inta laga yaabo in laga baxo.
Haweeney caruur leh waxay xaq u yeelaneysaa 1 / 8th oo keliya oo kiro ah, iyada oo aan la bixin doonin qaybtan ayaa si toos ah loo adeegsan doonaa. Xitaa hantida la wadaago waa la xakamayn doonaa ilaa laga gaaro arrinka dhaxalka maxkamad degaanka. Si ka duwan qawaaniinta kale, UAE ma shaqeyneyso 'xuquuqda badbaadada' (hantida u sii gudubta mulkiilaha wada nool ee dhimashada kan kale).
Intaa waxaa dheer in milkiilayaasha ganacsigu ay ka welwelsan yihiin, ha ahaadaan aagga bilaashka ah ama Jaalliyadaha, haddii ay dhacdo saamile ama dhimasho maamulaha, shuruucda maxaliga ah ee maxaliga ah ayaa quseeya, saamiyadu si toos ah ugama gudbaan badbaado ama xubin qoyska ka mid ah. Waxaa sidoo kale jira arrimo la xidhiidha masuuliyadda carruurta ee la jafay.
Waa macquul in la helo rabitaan si loo ilaaliyo hantidaada iyo caruurtaada, isla markaana loo diyaargaroobo dhammaan wixii dhici kara oo dhici kara berri.
Maxaa dhacaya marka uusan jirin dardaaranka dhimashada kadib?
Haddii qofku dhinto isagoo aan abuurin dardaaran, waxaa lagu yaqaanaa xiidmaha, hantidooda waxaa xallin doona sharciga gobolka ee qeexaya waxa dhaxalka loo gudbayo. Waxaa jira geedi socod sharci ah oo loogu wareejinayo hantida qofka dhintay dhaxlayaasha saxda ah, ee loo yaqaan probate.
Maaddaama uusan jirin howl wadeen la magacaabay, maamule waxaa magacaabay garsoore si uu ugu adeego awooddaas. Haddii dardaaranka loo arko inuusan shaqeyneyn, maamule waa in la magacaabaa. Si doonisyada si sharci ah loogu ansaxiyo, waa inay buuxiyaan heerar qaarkood. Si kastaba ha noqotee, shuruudaha way ku kala duwan yihiin gobol ilaa dowlad-goboleed.
Maamule inta badan wuxuu noqon doonaa qof qalaad, qof kasta oo isagu ama iyadu ay ahaadaan, waxay ku xidhnaan doonaan sharciyada probate ee gobolkaaga. Sidaa daraadeed, maamule waxaa laga yaabaa inuu gaaro go'aano aan qasab ku noqon doonin waxaad rabto ama rabitaanka dhaxalkaaga.
Miyaan Xaq u Leeyahay Inuu Xaaskeyga Isaga Kala Qeyb Qaato Ama Waxaan Leennahay Khamriyada Kala Duwan?
Inta badan qorsheeyayaasha guryaha ayaan kaala talin rabitaannada wadajirka ah, gobolada qaarkoodna, xitaa looma aqoonsana. Faa'iidada ayaa ah adiga, saygaaga / xaaskaaga ma wada dhiman doono isla waqtigaas, waxaana laga yaabaa inay jiraan guryo aan si wadajir ah loo qaban. Marka qof gaar ah ayaa macno samaynaya, in kastoo rabitaankaaga iyo kan xaaskaaga / seygaaga ay ku dhamaan karto isku ekaansho.
Gaar ahaan, rabitaano gooni ah ayaa u oggolaanaya xaas kasta in ay kahadasho arrimaha sida guur-wadaagta iyo caruurta cilaaqaadki hore. Tani waxay lamid tahay hanti laga helay guur hore. Waa inaad caddeysaa cidda heleysa waxa. Si kastaba ha noqotee, shuruucda saadaalinta caruuta ayaa inta badan doorbida xaaska hada jirta
Waa maxay ka-faa'iideyste?
Ka-faa'iideystayaasha dardaaranka waa kuwa loo magacaabay shaqsiyaadka ama kuwa sadaqada bixiya ee dhaxli doona hantida ama hantida qofka dhintay. Waxay tilmaamaysaa oo qeexaysaa cidda ay tahay ka-faa'iideystayaashu inay yihiin iyo dhaxalka ay heli doonaan.
Ka-faa'iideysteyaashu waa inuu ogaadaa in loogu magacaabay ka-faa'iideyste ahaan dardaaranka, iyo sidoo kale dhaxalka buuxa ee loogu talagalay iyaga. Si kastaba ha noqotee, ka-faa'iideystehu wuxuu heli karaa oo keliya, qiimeyn karaa, ama arki karaa dhaxalkiisa ka dib marka fuliyaha si guul leh u codsado tijaabinta iyo lahaanshaha hantida loo wareejiyay ka-faa'iideystaha.
Kumaa ah Howl fuliyaha (Opeutrix)?
Howl fuliyaha waa qof gacanta ku haya dhamaan howlaha maamulka iyo howlaha si loo hubiyo in rabitaanka baaraha la raaco si waafaqsan rabitaanka. Qofkani wuxuu iibsadaa hantida markii uu dhinto tijaabiyaha, wuxuu bixiyaa cashuurta dhaxalka oo dhan, oo wuxuu dalbadaa tijaabinta. Waxaa ku jiri kara ilaa afar fuliyayaal rabitaankaaga ah, oo sidoo kale waxay noqon karaan kuwa ka faa'iideysta dardaaranka.
Waxaa muhiim ah inaad magacaawdo qof lagu aamino inuu yahay fuliyaha maadaama ay iyagu yihiin kuwa raaca tilmaamaha sida ugu faahfaahsan dardaaranka. Markaad go’aansato fuliyaha, waxaad ku duubi doontaa magacooda iyo cinwaankooda dardaarankaaga. Howlfuliyaha waa inuu jiraa oo lala xiriiraa markii loo baahdo si uu u guto waajibaadkooda.
Intee jeer ayaa u Baahan Yahay in La Cusboonaysiiyo?
Waxay u egtahay inaadan waligaa cusboonaysiin doonistaada, ama waxaad dooran kartaa inaad cusbooneysiiso si joogto ah. Go'aanka gabi ahaanba adiga adiga ayaa kaa leh. Si kastaba ha noqotee, xusuusnow, nooca kaliya ee dardaarankaaga ah ee arrinta la xiriira ayaa ah midka ugu ansaxsan ee hadda jira waqtiga dhimashada.
Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waxaad jeclaan kartaa inaad dib ugu fiirsato doonistaada wakhtiyada ay isbeddelada waaweyn ee nolosha dhacaan. Kuwaas waxaa ka mid ah waqtiyo muhiim ah sida furriinka, dhalashada ilmaha, geerida ka-faa'iideystaha ama fuliyaha, iibsiga weyn ama dhaxalka, iyo wixii la mid ah. Sidookale, markay caruurtaadu qaangaar noqdaan, macno malahan macno ahaan in ilaaliyeyaal magacooda lasocoto, inkasta oo ilaaliyeyaasha loo magacaabi karo ku tiirsanaanta naafada.
Ayaa Xaq U Leh In Aan Ka Hortago Doontayda?
Ka hortagga dardaaran macnaheedu waa in laga doodo sharciga ama dhammaan ama qayb ka mid ah dukumintiga. Ka-faa'iideyste dareemaya in lagu gartay shuruudaha rabitaankiisa ayaa dooran kara inuu tartamo. Tani waxay lamid tahay lammaanaha, ama saygaadii hore, ama cunugga rumeysan in rabitaanka la sheegay inuu ka hor imanayo sharciga maxkabada maxalliga ah.
A waa loo tartami karaa sababo kala duwan awgood:
Hadeysan si sax ah u arkin.
Haddii aadan karti lahayn markii aad saxiixaysay.
Ama la saxeexay qasab ama khayaano darteed.
Garsooraha ayaa ah kan xallin doona muranka. Furaha si guul leh loogu tartamo dardaaranka waa markii ay jiraan khaladaad sharciyeed oo laga dhex helay. Difaaca ugu fiican, hase yeeshe, waa mid si cad loo diyaariyey oo si sax ah loo fuliyay.
Ku ilaali kuwa aad jeceshahay si sharci ah oo ku xirnaansho.
Xulo ilaaliye caruurtaada.